13 Bangiyada ugu Fiican Texas ee Keydka & Maalgelinta | 2022-
Bogga ugu weyn 13 Bangiyada ugu Fiican Texas ee Kaydka & Maalgashiga | 2022
13 Bangiyada ugu Fiican Texas ee Kaydka & Maalgashiga | 2022
Isha sawirka: canvapro.com
Texas waa mid ka mid ah gobollada ugu waaweyn Mareykanka. Laga bilaabo 2019, waxay leedahay 29 milyan oo deggan oo leh 500 bangi oo keliya.
Waad ogtahay waxa tani macnaheedu yahay, sax? Waxaa jira macaamiil ka badan bangiyada. Dhaqaalaha, waa loolanka u dhexeeya baahida iyo sahayda. Xusuusnow inuu jiro xiriir rogan oo u dhexeeya baahida iyo sahayda. Xaaladdan, dalabku waa macaamiisha iyo bangiyada wax-soo-saarka.
Si looga fogaado tartankan sicirka ah, u adeegso bangiyada ugu fiican Texas kaydinta & maalgashiga kuwaas oo kalsoonidooda la tijaabiyay oo aan waxba iska beddelin xitaa iyadoo ay jirto baahi badan.
Hoos ka akhri si aad u eegto 13ka bangi ee ugu fiican Texas. Macluumaad khuseeya oo iyaga ku saabsan ayaa lagu soo daray maqaalkan. Sidoo kale, dulmar guud ee kaydka iyo maalgashiga ayaa la bixiyay.
Guudmarka Kaydka & Maalgashiga
Kaydinta & Maalgashiga si is -dhaafsi ah ayaa loo adeegsaday, laakiin farqi ayaa jira.
Sida laga soo xigtay SAM, Kaydinta ayaa dhinac iska dhigaysa lacagta aadan hadda ku bixin a iibsiga mustaqbalka. Waa lacag aad rabto inaad si dhaqso leh ku gasho, adiga oo aan lahayn wax khatar ah ama aan lahayn, iyo canshuurta ugu yar. Hay'adaha maaliyadeed waxay bixiyaan dhowr ikhtiyaar oo kayd oo kala duwan.
Sidoo kale, Maalgashigu waa iibsashada hantida sida saamiyada, curaarta, maalgelinta labada dhinac, ama dhabta ahe iyadoo la filaayo in maalgashigaagu lacag kuu samayn doono. Maalgashiga inta badan waxaa loo doortaa in lagu gaaro hadafyada fog. Guud ahaan marka la hadlayo, maalgashiga waxaa loo qaybin karaa maalgelin dakhli ama maalgelin koritaan.
Waad maalgashan kartaa Hantida Guryaha ee Dijital ah.
Bankrate.com dib u soo celiyey dhibicdii isagoo ku daray in Kaydiyayaashu sida caadiga ah lacag ku shubaan koonto bangi oo halis yar. Kuwa raadinaya inay sare u qaadaan dakhligooda waa inay doortaan koontada kaydka boqolleyda ugu badan (APY) ee ay heli karaan.
Intaa waxaa dheer, Maalgashigu wuxuu la mid yahay kaydsiga oo ah inaad lacag iska dhigto mustaqbalka, marka laga reebo inaad raadineyso inaad gaarto soo -celin sare oo aad ku beddesho inaad qaaddo khatar badan. Waxaad isticmaali doontaa dillaal maalgashi ama koonto dilaal si aad u iibsato oo u iibiso.
Haddii aad raadinayso inaad lacag gashato, waa inaad qorsheysaa inaad lacagtaada ku haysato maalgashiga ugu yaraan saddex illaa shan sano.
Tan, waxaan ka soo qaadan karnaa in bangiyada Texas ay qaban karaan shaqada kaydinta & maalgashiga.
Fiiri 20 Software Tracking Investment Best.
Talooyin lagu Kordhiyo Kaydinta
Haddii aad raadineyso inaad sare u qaaddo dulsaarka dulsaarkaaga, ku keydi bangi internetka kaliya ah. Waxay badanaa bixiyaan qiimayaasha ugu fiican. In kasta oo ay tani u noqon karto ficil welwel leh teknolojiyadda, xogta ayaa muujisay in bangiyada internetka ay bixiyaan sicirka ugu fiican. Tani waxay noqon kartaa magdhow la'aanta joogitaankooda jirka.
Bangiyada ugu Fiican Pennsylvania PA 2022 | Heerarka, Noocyada Xisaabta, Min. Debaajiga
15 Bangiyada ugu Fiican Texas ee Kaydka & Maalgashiga | 2022
Waxaan kuu sharxi doonaa bangiyada ugu fiican Texas kaydinta iyo maalgashiga qaybtan. Nala joog!
#1 - Raasamaalka Koowaad
Kani waa mid ka mid ah bangiyada ugu wanaagsan Texas ee kaydinta iyo maalgashiga. Waxay badiyaa bixiyaan heerka kaydka ugu fiican.
Koontada kaydka ee Capital One 360 ​​waxay ku siinaysaa 1.30% APY qaddar kasta oo aad dhigato.
APY -ga caadiga ah waa 0.05% APY dhammaan dheelitirka.
Haddii aad jeclaan lahayd inaad hesho waayo -aragnimo hubin oo leh qiime kayd kayd oo sarreeya, waxaad ku furi kartaa koonto jeeg oo lagama -maarmaan ah koontadaada kaydka 360. Tan, waxaad lacag uga wareejin kartaa koontada jeegga akoonka kaydka.
Booqo Capital One
#2 - Bangiga Compass ee BBVA
Kani waa bangiga ugu fiican Texas dadka aan doonayn in laga qaado khidmadda bil kasta akoonadooda hubinta.
Waxaad asal ahaan keydisaa $ 120 sanadle ah oo loo qaadan lahaa kharash ahaan.
Koontada jeegga bilaashka ah ka sokow, dheelitirrada waaweyn ayaa sidoo kale helaya heerar kayd oo sarreeya. Tusaale ahaan, macaamiisha leh dheelitirka $ 10,000 ee koontada ClearChoice Money waxay helaan 2.35 APY.
Ogsoonow in sicirkan kaliya lagu dabaqi karo xisaabaadka laga furay internetka mana jiro waqti xaddidan APY -kan sare ee koontadan suuqa lacag.
Koontada keydintu waxay leedahay APY aad u hooseysa oo ah 0.05% oo leh dheelitir ka yar $ 10,000 oo qaata khidmad bille ah $ 15. Debaajiga ugu yar waa $ 25
Waxaan dhihi lahaa jillaabku weligiis ma seego bartilmaameed. Si kastaba ha ahaatee, bangiga kombiyuutarka ee BBVA, waxaad ka heli doontaa dhammaan adeegyada ugu fiican ee bangiyada gobolku bixiyaan.
#3 - Bangiga Ally
Ally waa bangi gebi ahaanba onlayn ah oo leh hawlo guur-guura iyo shabakadba leh. APY waa 0.05% koontada kaydka.
Kadib, koontada jeegga, dheelitirka ugu yar ee maalinlaha ah wuxuu helayaa 0.10% iyo $ 15,000 wuxuu helaa 0.25% APY.
#4 - Bangiga Qaranka ee Koowaad Texas
Kani waa mid ka mid ah bangiyada ugu fiican Texas oo caawiya kaydinta iyo maalgashiga ganacsiyada yaryar.
In ka badan 300 laamood oo ku dhexyaal gobolka, meheraddaadu waxay u dhowdahay laanta koowaad ee Bangiga Qaranka Texas.
Waxay bixiyaan amaah iyo adeegyo ganacsi milkiilayaasha meheradaha yaryar. Koontada hubinta ayaa meesha ka saareysa $ 11.97 bishii. Sidoo kale, waxaa jira lacag la'aan leh 10 kaarka bangiga oo la isticmaalo AMA $ 250 ugu yaraan maalin kasta.
Bangiyada ugu Fiican Alabama 2022 | Heerarka, Noocyada Xisaabta, Min. Debaajiga
#5 - Wells Fargo
Kani waa mid ka mid ah bangiyada ugu wanaagsan Texas oo leh tiro aad u badan oo ah goobo banch iyo ATM -yada Texas.
Sidoo kale, waxay sidoo kale leeyihiin internetka weyn iyo sifooyinka mobile.
Bangiga Wells Fargo wuxuu bixiyaa adeegyo sida xisaabaadka Hubinta, koontada Keydka iyo CD -yada, Kaararka Debit & Credit, Sarrifka Dibadda, iyo Adeegyada Xawaaladaha Caalamka.
Koontada kaydka qaaliga ah waxay leedahay APY ilaa 0.02% macaamiisha leh koonto Wells Fargo Portfolio oo xiriir la leh iyo 0.01% badeecadeeda Way2save iyo deebaajiga ugu yar ee furitaanka $ 25.
Booqo Wells Fargo
#6 - Bangiga Frost
Haddii aad raadineyso bangi ku siin doona adeegga macaamiisha ugu fiican, waa Frost.
Si ka duwan bangiyada qaarkood, ma jiraan qodobo dhexdhexaadin heshiisyada xisaabta. Koontada kaydka Frost waxay leedahay deebaaji ugu yar $ 50 iyo 0.01% APY.
#7 - Bangiga CIT
Waxaa la aasaasay 2011, Bangiga CIT wuxuu xubin ka yahay FDIC. Waa bangi onlayn ah oo bixiya CD -yada, xisaabaadka kaydka, IRA -yada, iyo xisaabaadka haynta.
Koontada Dhismaha Kaydka Bangiga ee CIT ayaa ku siineysa 0.45% APY haddii aad haysan karto $ 25,000 dheelitirka ugu yar ama aad yeelan karto $ 100 deebaaji bille ah. Halkii, waxaad heli doontaa 0.29% APY.
Waxaa jira deebaaji ugu yar $ 100
#8 - Bangiga Chase
Kani waa bangiga ugu fiican Texas ee ardayda. Ardaydu waxay ka faa'iideysan karaan Koontada Hubinta Kulliyadda Chase oo loogu talagalay ardayda kulliyadda laga bilaabo 17 illaa 24 sano.
Si aad uga fogaato khidmadda billaha ah ee $ 6 dhammaan maalmaha kulliyaddaada, waxaad u baahan tahay inaad si toos ah u dhigato $ 5,000 wareeg kasta oo bayaan ah.
Koontada jeegga, ma jirto deebaaji ugu yar iyo APY.
Lacagta ugu yar ee lagu shubo xisaabta bangiga Ally waa $ 0. Macaamiishu waxay helaan 0.5% APY.
#9 - Bangiga Ameerika
Bangiga Ameerika waxaa lagu aasaasay San Francisco sanadkii 1998 markii Bangiga Qaramada Midoobay uu helay Bank America.
Sida laga soo xigtay websaydhka, Bank of America wuxuu bixiyaa adeegyo sida hubinta, kaydinta, kaararka deynta, amaahda guriga, amaahda baabuurta, iyo maalgashiga.
Kaydintu waxay soo jiidataa dulsaarka 0.01%. Sidoo kale, adeegsadayaashu waxay u baahan yihiin inay lahaadaan dheelitir ugu yaraan ah $ 500 si looga fogaado ajuurada.
Waxaa laga yaabaa inaad jeceshahay inaad tan akhrido: Amaahda Ardayda Bangiga America: Dib -u -maalgelinta iyo Beddelka.
#10 - USAA Bank Savings Bank
Kani waa mid ka mid ah bangiyada ugu waaweyn uguna wanaagsan Texas marka loo eego baaxadda hantida. Koontada jeegga ee USAA ma laha khidmado iyo dheelitirka ugu yar kadib markaad ku furto $ 25.
Waxay leedahay koonto kayd oo lagu kalsoonaan karo iyo ilaa 0.3% APY. Waxa kale oo jira astaamo gaar ah oo loogu talagalay xubnaha milatariga iyo ilaalinta xad dhaafka ah ee macaamiisha leh koontada labaad ee USAA.
#11 - Bangiga Capital Texas
Caasimadda Texas waxay bixisaa dhammaan adeegyada bangiyada marka laga reebo amaahda guryaha. Si kastaba ha noqotee, waxay siisaa amaahda ganacsiyada xalka amaahda iyo adeegyada caalamiga ah.
Dib u eegista amaahda guryaha, akhri: Faallooyinka amaahda guryaha ee Lenda: Sida ay u Shaqayso | Ma sharci baa.
Waxaa jira koonto hubin caqli leh, oo ikhtiyaarka bilaashka ah wuxuu leeyahay deebaaji furitaan ah $ 100. Adigu, waxaad ku helaysaa jeegaggii hore ee bilaashka ahaa, kaararka jeegga fiisaha, iyo bangiga onlaynka/guurguura.
Ugu dambayn, koontada keydintu waxay leedahay xaddiga ugu yar ee furitaanka $ 100 iyo APY oo ah 0.01% laakiin ma jiraan wax khidmad ah.
Booqo Texas Capital
#12 - Bangiga Barwaaqada
Koontada kaydka ee bangiga barwaaqada waxay bixisaa APY sare oo ah 0.30% laakiin waxay ruxaysaa khidmadda adeegga $ 3 bishii haddii dheelitirkaagu ugu yaraan yahay $ 200.
Waxa kale oo jira koonto jeeg oo lacag la'aan ah oo aan lahayn khidmad adeeg iyo dheelitirka ugu yar marka aad furato koontada $ 100 iyo wixii ka sareeya.
#13 - Bangiga Madaxa Bannaan
Kani waa bangi kale oo ugu fiican Texas oo leh APY 0.5%. Koontada ayaa si otomaatig ah loogu lammaaniyaa koontada jeegga abaalmarinta ee bilaashka ah. Si aad u hesho dulsaar sare, waxaad u baahan tahay dheelitir sare.
Koontada jeegga abaalmarinta bilaashka ah waxay ku siinaysaa 1.5% APY haddii dheelitirkaagu yahay ilaa $ 10,000, laakiin waxay u baahan tahay deebaaji ugu yar $ 100.
7 Caymiska Caafimaadka ugu Fiican Texas 2022 | Tusaha Khubarada
Gebogebadii, waxaan ku taxnay dhammaan bangiyada astaamahooda muhiimka ah ee hoose. Fiiri.
#1 Capital One Keydinta & Hubinta 0.05% N / A
#2 Bangiga Compass BBVA Kaydinta, Hubinta, & akoonka Lacagta 0.05% $ 25
#3 Bank Ally Kaydinta, Hubinta 0.5% $0
#4 - Bangigii ugu horreeyay ee Qaranka Texas
#5 - Wells Fargo Kaydinta 0.01% $ 25
#6 - Bangiga Frost Kaydinta 0.01% $ 50
#7 Bangiga CIT Keydinta & CD -yada 0.45% $ 100
#8 Baacsasho Xisaabaadka Jeegga iyo Kaydinta 0.01% $ 25
#9 Bangiga America Kaydinta, koontada hubinta 0.01% $ 500
#10 USAA Bank Savings Bank Kaydinta, koontada hubinta 0.3%
#11 Bangiga Capital Texas Kaydinta, Koontada Hubinta 0.01% $ 100
#12 Bangiga Barwaaqo Kaydinta, Hubinta xisaabaadka 0.3%
#13 Bangiga Madaxa Bannaan Kaydinta, Hubinta 0% $ 100 (Hubinta)
Wareegga Maalka waxay danaynaysaa amnigaaga dhaqaale!
15 Raad -raacayaasha ugu Wanaagsan Sanadka 2022 | Talooyinka Maareynta Lacagta
Bangiyada ugu Fiican New York sanadka 2022 | Heerarka, Noocyada Xisaabta, Min. Debaajiga
Miyaan qori karaa jeeg naftayda? Tilmaan fudud
Bangiyada Maalgashiga ee ugu Fiican Kanada 2022
Fundrise ma sharcibaa? Eeg Dib -u -eegid Buuxda - Wareegga Hantida
Barnaamijyada Kuuban ee ugu Fiican ee loogu talagalay Isticmaalayaasha Android sanadka 2022 | Hadda Soo Dejiso
Sida Loo Sameeyo 10 Dollar Maalintii | 21 Siyaabood Oo Lagu Helo Lacag Degdeg Ah
Xisaabaadka Keydka Tooska ah ee Wax-soosaarka Sare ee ugu Fiican ee Janaayo 2022
Miyaad raadinaysay akoon kayd ah oo siiya ilaalinta maamulahaaga, badbaadada caymiska federaalka,…
Sida Loo Furo Xisaab Bangi Iyo Dhammaan Waxa Aad U Baahan Tahay Inaad Sidaasi Sameyso
Furitaanka koonto bangi waxay u ekaan kartaa wax laga naxo marka la eego tirada badan ee fursadaha jira. Aan tuso…
Top 10 Software Xisaabaadka Ganacsiga Yaryar ee 2022
Marar badan, milkiilayaasha ganacsiga yaryar waxay waydiiyaan inay lagama maarmaan tahay isticmaalka software xisaabaadka. Katagitaanka dukumeenti ku filan…
Imisa Jeegaaga Mushaharka ah ayay tahay inaad isla markiiba keydiso?
Inta badan dadku waxay la yaaban yihiin inta ay tahay inay ka badbaadiyaan jeeggooda; fikradahooda intooda badan…
Bangiyada ugu Wanaagsan Seattle 2022 | Heerarka, Noocyada Xisaabta, Min. Debaajiga
Helitaanka bangi heersare ah oo ku yaal Seattle waxay noqonaysaa hawl aad u adag marka ay maalmuhu sii socdaan gaar ahaan marka…
Bangiyadu waxay ku hawlan yihiin sidii ay u sugi lahaayeen khasnadaha maaliyadeed. Si kastaba ha ahaatee, waxay u kala rogeen meelaha kale ee muhiimka ah ee…